प्रतिक्षित चलचित्र ‘बाहुबली २’को प्रदर्शन मिति तोकिएको छ । भारतका चर्चित पत्रकार तरण आदर्शले आफ्नो ट्विटरबाट फिल्मको प्रदर्शन मितिबारे जानकारी दिएका हुन् । यसै बर्षको अन्त्यमा प्रदर्शन हुने अपेक्षा गरिएको यो चलचित्र अब सन् २०१७ मा रिलिज
दीपिका र रणबीरको सम्बन्धमा खटपट !
पछिल्लो पटक बलिउडमा प्रेमजोडीको रुपमा कहलिएका दीपिका पादुकोण र रणबीर सिंहको सम्बन्धमा खराबी आउन सुरु गरेको केही भारतीय मिडियाले दाबी गरेको छ । दीपिकाले रणबीर सिंहको विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार गरेलगत्तै उनीहरुको सम्बन्ध बिग्रेको अनुमान गरिएको
बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा पहिलो पटक हउिडको पर्दामा देखिन लागेकी छिन् । सन् १९९० मा बनेको चर्चित टेलिभिजन धारावाहिक वेवाञ्च माथि आधारित रहेर बन्न लागेको चलचित्र “वेवाञ्च”मा उनी खलनायिका बन्न लागेकी हुन् । यही चलचित्रमार्फत उनी हलिउड पर्दा
बाबु बन्दै साहिद, मिरा गर्भवती ?
गतबर्षको जुलाइमा बिहे बन्धनमा बांधिएका साहिद र मिराले पहिलो बच्चाको चाहना राखेका हुन् । केही समय अगाडि मात्र साहिदले मिडियासँग कुरा गर्दै मिराको आगमनले आफनो जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको बताएका थिए । साहिदले लामो समयदेखि मिराको पुर्ण तस्बिर
सनीको “घायल वन्स अगेन” सय करोड पार गर्ने अनुमान
इस्वी संम्बत् १९९० मा एउटा ब्लाकबास्टर फिल्म “घायल” रिलिज भएको थियो त्यो बेला र त्यसको ठिक २५ बर्षपछि त्यही फिल्मको सिक्कवेल घायल वन्स अगेन शुक्रबारको रिलिज भएको छ । धेरै चर्चा बटुल्दै आएका छन यो फिल्म रिलिज हुनु भन्दा अघि नै । कोही घायल
पाकिस्तानले दिएन अनुपम खेरलाई भिसा ?
बलिउडका चर्चित कलाकार अनुपम खेरलाई पाकिस्तानले भिसा दिन इन्कार गरेको छ । फेव्रुअरी ५ मा उनी कराँचीमा हुने साहित्यिक महोत्सवमा सहभागी हुनका लागि पाकिस्तान जान लागेका थिए । तर, पाकिस्तानी राजदुतावासले उनलाई भिसा दिन इन्कार गरेको भारतीय संचार
महिलालाई हातपात गरेको आरोपमा बलिउड अभिनेता नवाजुद्धिन विरुद्ध मुद्दा दायर
अभिनेता नवाजुद्धिन सिद्धिकीको विरोधमा वर्सोवा पुलिस स्टेशनमा एक युवतीले हात हालाहाल तथा छेडछाडको मुद्दा दायर गरेकी छन् । सञ्चारमाध्यमका अनुसार मुम्बईको यारी रोडमा रहेको एक अपार्टमेन्टको पार्किङमा उनको एक युवतीसँग विवाद भएको थियो । अहिलेसम्म
राखीले भनिन् – भारतीय दर्शकले पोर्नस्टारलाई भगवान माने
आईटम गर्ल राखी सावन्तले भारतीय दर्शक झुर भएको भन्दै दर्शकले नै पोर्नस्टारलाई भगवान बनाएको आरोप लगाएकी छिन् । ‘हामा्र दर्शक पनि झुर छन् पोर्नस्टारलाई समर्थन गर्छन् ।’ आफ्नै भिडियो पार्टी पञ्जाबी स्टाईल सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन् । साथै उनले
वर्षको सुरुवातमै भिड्ने भए अमिताभ र सन्नी
सन २०१६ सुरु भएको पहिलो महिनामै बलिउड बक्स अफिसमा केही ठूला स्टारविच भीडन्त हुने भएको छ । अभिताभ बच्चन, सन्नी देओल र अक्षय कुमारका चलचित्रले बक्स अफिसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । बलिउड बक्स अफिसमा जनावरी महिनालाई ब्यापारको हिसावले
१२ वर्षको उमेरमै कण्डम प्रयोग गरे : नायक रणवीर सिंह
बलिउडका नायक रणवीर सिंहले आफूले पहिलोपटक १२ वर्षको उमेरमा कण्डमको प्रयोग गरेको बताएका छन् । फेशन म्यागाजिन जिक्यु लाई दिएको अन्तरवार्ताका क्रममा रणवीरले २६ वर्षको उमेरसम्ममा केही महिलासँग सम्बन्ध समेत रहेको बताएका छन् । रणवीरले हालै एक
सलमान खान आरोपमुक्त
हिट एण्ड रन मामिलामा पा“च वर्षको सजाय पाएका बलिउड अभिनेता सलमान खान आरोप मुक्त भएका छन् । अदालतले सलमानको गाडीले किचेर एक जनाको मृत्यु भएको भन्दै पिडित पक्षको जाहेरिको आधारमा उनिमाथि हिट एण्ड रन मामलामा पाच वर्षको सजाय हुन सक्ने बताइएको
गोबिन्दालाई अदालतले भन्यो- फ्यानसँग माफी माग
अभिनेता गोबिन्दाले आफ्नै फ्यानसँग माफी माग्नुपर्ने भएको छ । भारतको उच्च अदालतले गोबिन्दालाई आफुले झापड हानेको ब्यक्तिसँग माफी माग्न आदेश दिएको छ । सन २००८ मा गोबिन्दाले फिल्मको सेटमा एकजना फ्यानलाई थप्पड मारेका थिए । थप्पड काण्डपछि पीडित
अभिनेता अक्षय कुमारले आफ्नो प्रदर्शोन्मुख फिल्म ‘एयरलिफ्ट’ को पहिलो पोस्टर सार्वजनिक गरेका छन् । यो चलचित्र सन १९९०/१९९१ मा इराक-कुवेत युद्धमाथि आधारित छ । फिल्मको निर्देशक रहेका छन् राजा कृष्ण मेनन् । यस फिल्ममा ‘लञ्च बक्स’की सुन्दरी
३ दिनमा ‘प्रेम रतन धन पायो’को कमाई १ सय करोड, तर तोडिएन रेकर्ड
बलिउडमा यो बर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ५ वटा चलचित्रले १ सय करोडको क्लबलाई छोएका छन् । यो बर्ष ‘बजरंगी भाइजान, तन्नु वेड्स मन्नु रिटन्र्स, एवीसीडी २ र बाहुबली’ले १ सय करोड माथिको व्यापार गरेका थिए । गतबर्षको भन्दा यो बर्ष सय करोडको आँकडा कम
अन्तत भिड्ने भए शाहरुख र रणवीर
अन्तत आउादो १८ डिसेम्बरमा बलिउडमा दुई ठूला फिल्मविच भिडन्त हुने भएको छ । रोहित शेट्ठी निर्देशित ‘दिलवाले’ १८ डिसेम्बरमै प्रदर्शन हुने भएको छ भने सञ्जय लीला भन्सालीले पनि बाजीराव मस्तानी १८ तारिखमै प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् । दिलवालेमा